Gmail kuma soo dirto ogeysiisyada ku saabsan Android: Afar xal | Androidsis
Maxaa la sameeyaa haddii Gmail uusan u dirin ogeysiisyada ku saabsan Android
Gmail waa codsi aasaasi ah oo ku saabsan Android. Waad ku mahadsan tahay, waxaan had iyo jeer ka helnaa boostada taleefanka. In kastoo, in muddo ahba ay jireen isticmaaleyaal badan oo ka warbixiya inaysan haysan ogeysiisyo markay email ku helaan koontadooda. Tani waa wax sababo dhowr ah yeelan kara. Sidaa darteed, markay tahay xallinta dhibaatada, waxaa jira fursado dhowr ah.
Nasiib darrose, waa wax iska caadi ah inay ku dhacdo taas daqiiqad cayiman Gmail kuma soo dirto ogeysiisyada taleefanka marka e-mayl la helo. In kasta oo xalka suurtagalka ah ee guuldarradan ku jirta barnaamijka ay fududahay. Markaa haddii tan kugu dhacday, wax walwal ah ma qabtid, maxaa yeelay waxay leedahay xal.
Codsigu wuxuu soo bandhigayay isbeddelo badan bilooyinkan. Sidaa darteed, waxaa jiri kara isticmaaleyaal aan gebi ahaanba ku qanacsaneyn arrintan, iyo waxay rabaan inay dib ugu noqdaan naqshaddii hore ee barnaamijka. Xaaladdan oo kale, waxaan daryeelaynaa dhibaatada ogeysiis la'aanta Gmail. Guul darrooyin sababo badan yeelan kara, kuwaas oo ay jiraan dhawr xal oo suurtagal ah.
Khiyaamada ugufiican ee Gmail loogu hagaajiyo Android
1 Dejinta Gmail
2 Ogeysiisyada ku saabsan Android
3 Ka nadiifi qafiska
4 Habka badbaadinta batteriga
Dhibaatada waxaa laga yaabaa inay tahay in isticmaalaha uu leeyahay si qalad ah ayuu wax ugu beddelay goobaha Gmail. Marka marka emayl soo galo, ma haysatid ogeysiis taleefanka ah. Haddii ay arintu sidan tahay, xalka dhibaatada runti waa mid fudud. Tan iyo markii aan kaliya hubinno in ogeysiisyada lagu aamusay goobaha barnaamijka ee ku yaal Android.
Waa inaad furto menu-ka dhinca barnaamijka, adigoo gujinaya saddexda xargo ee jiifka ah. Kadib, waa inaad gasho goobaha. Markaa waa inaad gujisaa magaca koontada isticmaaleha, si markaa dejimaha koontada la sheegay loo galo. Goobahan ayaan ka helnaa qayb ka mid ah ogeysiisyada, taas oo ah ta ina danaysa.
Waa inaad gashaa ogeysiisyada la helay oo aad hubiso in Ikhtiyaarka ku ogeysiiso farriin kasta waa la hawlgaliyay. Haddii kale, waa inaad sameysaa, maxaa yeelay tani waxay ahayd sababta uusan Gmail u soo saarin ogeysiisyada ku saabsan Android markii email la helay. Sidan oo kale, iyada oo shaqadan horeyba loogu hawlgalay barnaamijka, ogeysiisyada waa in si caadi ah loogu soo celiyaa.
Ogeysiisyada ku saabsan Android
Muuqaal muhiim ah oo lagu xisaabtamayo, oo xaaladaha qaarkood la ilaaway, ayaa ah inay jiraan isticmaaleyaal wax ka beddelay ogeysiisyada ku saabsan taleefannadooda casriga ah ee Android. Taleefanka waan awoodnaa maamul wargelinta abka. Marka waxaa laga yaabaa inaan go'aan ku gaarnay ka jooji ogeysiisyada mid ka mid ah barnaamijyadooda, sida laga yaabo inay ku dhacdo Gmail munaasabaddan. Sidaa darteed, ma helno ogeysiisyo markii aan helno emayl.
Marka waa inaad fulisaa nidaamka hawlgelinta ogeysiisyadan mar kale. Sidaa darteed, geli dejimaha taleefankaaga Android halkaasna waxaad u baahan doontaa inaad tagto qaybta codsiyada. Raadi Gmail liiska codsiyada muuqda oo dhagsii. Waxaa jira qayb leh xulashooyin kala duwan, midkoodna waa ogeysiisyo.
Kadibna waan galeynaa waana inaan hubinaa taas ma jiro wax ikhtiyaar ah oo xannibaya ogeysiisyada Gmail on Android. Haddii ay jirto wax jira, waa inaad barkintaa, oo aan dhibaato badan. Sidan oo kale, waa inaan ku helnaa ogeysiisyada taleefanka markale.
Sida loo maareeyo hawlgalka ogeysiisyada
Ka nadiifi qafiska
Waxay noqon kartaa inay jirto cilad ku jirta Gmail, sida ku dhici karta barnaamijyada kale ee taleefanka ku jira. Xaaladda noocaas ah, nadiifinta khasnadda badanaa waa wax dad badani kugula taliyaan. Maaddaama haddii qadar badan oo kayd ah ay urureen, waxay ku dambayn kartaa inay qaadato dhibkeeda oo ay dhici karto inay khaladaad ku jiraan hawlgalka codsi Marka way fiicantahay in laga saaro markasta.
Tallaabooyinka lagu nadiifinayo kaydinta arjiga ee ku jira Android waa mid fudud, sidaan horeyba uga soo faalloonay munaasabada qaar. Marka taas hadday tani tahay asalka fashilka Gmail, taas oo ogeysiisyadan loo joojiyay, markii kaydka barnaamijka la nadiifiyey, waa inuu si caadi ah mar labaad u shaqeeyaa. Marka waa runtii xal fudud kiiskan.
Habka badbaadinta batteriga
In Android waxaa jira suurtagalnimada isticmaalka habka loogu yeero batari-keydinta taleefanka, noocyada qaar ee nidaamka qalliinka. Waa hab fiican markay tahay yaree isticmaalka batteriga aaladda. In kasta oo ay dhibaato leedahay, maadaama xaalado badan xaddido hawlgalka barnaamijyada qaarkood ee taleefanka.
Tusaale ahaan, isku dhejinta ama xogta asalka badiyaa lama shaqeysiiyo. Tani waa wax si toos ah u saameynaya sida Gmail u shaqeeyo. Sababtaas awgeed, waxaa suurtagal ah in inta lagu jiro xilliga uu qaabkani shaqeynayo, aan la heli doonin emayl ama ogeysiisyo emayl ah. Marka curyaaminta qaabkani waxay u oggolaanaysaa Gmail inuu si caadi ah mar labaad u shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Maxaa la sameeyaa haddii Gmail uusan u dirin ogeysiisyada ku saabsan Android